သင်းအုပ်ဆရာဆိုင်ရာဆွေးနွေးအကြံပြုခြင်း – Full Gospel Assembly
Posted on July 6, 2020 Posted By: FGAMyanmar Categories: Pastor and Management
သိုးထိန်းတည်းဟူသောသင်းအုပ်၏ သင်းအုပ်ဆိုင်ရာ ကြည့်ရှုပြုစုခြင်းလုပ်ငန်းတွင် အရေးကြီးသောလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးအကြံပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ကြည့်ရှုပြုစုခြင်းသည် အချိန်တိုင်းလုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး၊ တိုင်ပင်ဆွေးနွေး အကြံပြုခြင်းသည် လိုအပ်သောအချိန်တွင်လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းသည် သင်းအုပ်များကသာ လုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်း မဟုတ်ဘဲ ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်များ၊ သင်းထောက်များ၊ အသင်းတော်ကဏ္ဍ အသီး
သီးမှ ကော်မီတီဝင်များ၊ ကောင်းဆဲလိန်းလုပ်ငန်းကို စိတ်ဝင်စားသော သာမန်အသင်းသားများ ပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ကောင်းဆဲလိန်းတွင် အကောင်းဆုံးသော ဆရာသည် သခင်ယေရှုဖြစ်ပါသည်။ သခင်ယေရှုသည် တိုင်ပင်ဘက်/အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်(ဟေရှာယ၉း၆)၊ ကောင်းသောသိုးထိန်း(ယောဟန် ၁၀း၁၁-၁၆)၊ သိုးထိန်းကြီး(ဟေဗြဲ၁၃း၂၀၊ ၁ပေတရု ၅း၄)၊ ကျန်းမာခြင်းပေးသောအရှင်(မဿဲ၈း၁၆-၁၇၊၁ပေ ၂း၂၄) ငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်(ယောဟန်၁၄း၂၇)၊ ဆုတောင်းပေးသောသူ(ရောမ ၈း၃၄)စသည့် အ
ရည်အချင်းများ နှင့်ပြည့်စုံသောသူဖြစ်သည်။ ဝေါဟာရအဓိပ္ပါယ်နှင့် ဦးတည်ချက်သင်းအုပ်ဆိုင်
ရာလုပ်ငန်းများသည် ယုံကြည်သူအသင်းသားများ၏ ခန္ဓာ၊ စိတ်၊ ဝိညာဉ်ကျန်းမာခြင်းရရှိရန်နှင့် ခရစ်တော်၏သဏ္ဍာန်နှင့် တူညီသော အသက်တာရရှိပြီး တိုးတက်၍ အသက်တာရင့်ကျက်စေရန် ကျွေးမွေး၊ ကြည့်ရှုပြုစုခြင်းဖြစ်သည်။
ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် ကျန်းမာခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ဂရိတ်စကားလုံးတွင် therapeuo ဟုဖော်ပြထာပြီး၊ အဓိပ္ပါယ်မှာ အကူအညီပေးသောသူ၊ ကျန်းမာခြင်းပေးသောသူ၊ အစေခံသောသူဖြစ်ပါသည်။ လက်တင်ဘာသာစကားတွင် ministerium ဖြစ်ပြီး၊ အမှုတော်ဆောင်၊ အစေခံဟု အဓိပ္ပါယ်ရှိပါသည်။ ဤဆောင်းပါးတွင်စာရေးသူသည်Counselorကို အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ Counselee ကိုတိုင်ပင်သူ၊ counseling ကိုတိုင်ပင် ဆွေးနွေးအကြံပြုခြင်း(သို့မဟုတ်) ကောင်းဆဲလိန်းဟူ၍ အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်သည်။
သင်းအုပ်ဆိုင်ရာ ကြည့်ရှုပြုစုခြင်းလုပ်ငန်းသည် သမ္မာတရားနှင့်ညီညွတ်သော သိုးထိန်း၏ ပုံရိပ်ဖြစ်ပြီး၊ ဘာသာရေး အသိုင်းအဝိုင်းထဲတွင် ဒုက္ခပြဿနာနှင့် ရင်ဆိုင်သောသူများ၊ ဝမ်းနည်းခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှု ခံစားနေသောသူများကို အထူးကြည့်ရှုပြုစုခြင်းလုပ်ငန်း ဖြစ်သည်။ ကောင်းဆဲလိန်းသည် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးအကြံပြုခြင်း၊ လမ်းညွှန်ခြင်း၊ အားပေးနှစ်သိမ့်ခြင်း၊ အားပေးတိုက်တွန်းခြင်းများစသည့် လုပ်ငန်းများပါဝင်သည်။
HowardClinebell ကသင်းအုပ်ဆိုင်ရာ ကောင်းဆဲလိန်း၏ပန်းတိုင်သည် လူတို့၏ ဆင်းရဲဒုက္ခ ပြဿနာဖြေရှင်းရာတွင် ကူညီပြီး၊ လုံလောက်စွာ အသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်းနှင့် သူတို့၌ အလား
အလာရှိသည့် အတိုင်းကြီးထွားခြင်းနှင့် ပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ သင်းအုပ်ဆိုင်ရာ ကောင်းဆဲလိန်းတွင် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သော သင်းအုပ်နှင့်အမှုတော်ဆောင်သည် ဘုရားသခင်နှင့်သမ္မာကျမ်းစာကို အခြေခံ၍ လူများကို ချဉ်းကပ်ရမည်။ တိုင်ပင်သူက အတိုင်
ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထံမှ ရရှိသောမေတ္တာအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏မေတ္တာကိုရရှိခံစားနိုင်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ သင်းအုပ်ဆရာ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် တိုင်ပင်သူများအပေါ်၌ ကောင်းသောသိုးထိန်း ဖြစ်ရမည်။ကောင်းဆဲလိန်း၏ဦးတည်ချက်မှာ လူ့ဘဝနှင့်ဆိုင်သော ပြဿနာများနှင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့သဖြင့် အကူအညီ လိုအပ်နေသောသူများကို ပံ့ပိုးကူညီခြင်းဖြင့် သူတို့၏ခန္ဓာ၊ စိတ်၊ ဝိညာဉ်ကျန်း
မာခြင်းရရှိပြီး၊ ဘဝမှာ အောင်မြင်မှုများ ပြန်လည်ရရှိစေရန်အတွက် ဖြစ်ပါသည်။ သင်းအုပ်ဆိုင်
ကျန်းမာခြင်းဟုဆိုရာတွင် ယခင်က ကျွန်ုပ်တို့၌ရှိခဲ့သည့် ပြည့်စုံသောပျော်ရွှင်မှုမျိုးကို ပြန်လည်ရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ကျန်းမာခြင်းတွင် ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာသန်စွမ်းခြင်းသာမဟုတ်ဘဲ ဝိညာဉ်ရေး၊ စိတဓါတ်နှင့်လူမှုဆက်ဆံရေးတွင် ကျန်းမာခြင်းလည်းပါဝင်သည်။လူများအတွက် ကျန်းမာခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် လူနာကိုဆီနှင့်လူးခြင်း၊ ဆုတောင်းပေးခြင်း၊ နတ်ဆိုးနှင်ထုတ်ခြင်းများလည်း ပါဝင်ပါသည်။(ယာကုပ်၅း၁၄။မာကု၁၆း၁၇)
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ၊ အဖွဲ့လိုက်ဖြစ်စေ၊ အခက်အခဲဒုက္ခရောက်သည့်အခါ ကူညီမစဖို့ရန် လိုအပ်သည်။ အသက်တာကို ခြိမ်းခြောက်သောအရာများဖြစ်သည့် သေခြင်း၊ ဝမ်းနည်းပူဆွေးခြင်း၊ ဖျားနာခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပူန်ခြင်းနှင့် အထီးကျန်ဖြစ်ခြင်းစသည်တို့ကို ခံစားသောသူများကို အားပေးခြင်း၊ နှစ်သိမ့်ပေးခြင်း၊ သူတို့နှင့်အတူရှိနေခြင်းဖြင့် အားဖြည့်ပေးနိုင်ပါသည်။ထိုသို့ ကူညီပေးခြင်းဖြင့် ယုံကြည်သူများ၏ အသက်တာကို ယုံကြည်ခြင်း၌ မြဲမြံခိုင်ခန့်စေနိုင်သည်။
လမ်းပြခြင်း၊ လမ်းညွှန်ခြင်းသည် ယုံကြည်သူများ၏ အတွေးအခေါ်၊ ယုံကြည်ခံယူချက်နှင့် ပြုမူခြင်းတို့အကြား၌ မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှု ပြုလုပ်တတ်စေရန် ကူညီခြင်းဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် လူငယ်များအတွက် အိမ်ထောင်ဘက်ရွေးချယ်ခြင်း၊ အလုပ်ကိစ္စ၊ ပညာရေး၊ အပျော်အပါးလိုက်စားခြင်းစ
သည့် လူတို့၏အသက်တာကို ထိခိုက်စေနိုင်သောအရာများအတွက် လမ်းညွှန်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ထို့အပြင်ဝိညာဉ်ရေး၌ ကြီးထွားရင့်ကျက်ဖို့ရန် လမ်းညွှန်ခြင်းလည်းပါဝင်သည်။
သင့်မြတ်ခြင်းဆိုသည်မှာ အဖွဲ့အစည်းများကြားတွင် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် စိတ်ဝမ်းကွဲပြားခြင်းမှ စည်းလုံးညီညွတ်မှု ရရှိခြင်းဖြစ်သည်။သင့်
မြတ်ခြင်းတွင် ဘုရားသခင်နှင့် လူသားတို့အကြားသင့်မြတ်ခြင်းနှင့် လူသားအချင်းချင်းသင့်မြတ်ခြင်း ဟူ၍ရှိသည်။ထို့အပြင် သင့်မြတ်ခြင်းရရှိရန် ဘုရားသခင်၏ခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့်၊ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် ခွင့်လွှတ်ခြင်းရရှိခြင်းဖြင့် မှန်ကန်သောဆက်သွယ်မှု ပြန်လည်ရရှိပြီး အသစ်သောအသက်တာ ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်သည်။
ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းသည် ဆက်လက်၍လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်လိုအပ်သော လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ဖြစ်စေ၊ အဖွဲ့
လိုက်ဖြစ်စေ အမြင့်မားဆုံးသော (သို့မဟုတ်) အကောင်းဆုံးသော အဆင့်သို့ရောက်ရှိနိုင်ရန် ဦးတည်၍ ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်ခန္ဓာ၊ စိတ်ဓါတ်၊ ဝိညာဉ်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ တိုးတက်ကြီးပွားရန်အတွက် လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။
လူသားများသည် စာတန်မာရ်နတ်၏ ချုပ်ချယ်မှု၊ ချုပ်နှောင်မှုတစ်ခုခုနှင့် ရင်ဆိုင်နေတတ်ကြသည်။ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေး ချို့တဲ့ခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်
စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ လူမှုဆက်ဆံရေး မပြေလည်ခြင်း၊ ဝိညာဉ်ရေး၌ ထိုင်းမှိုင်းခြင်းစသည်တို့ကို ခံစားသောသူများကို လွတ်မြောက်ခြင်းရရှိစေရန် အကူအညီပေး လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၌ထားရှိရမည့်စိတ်နေသဘောထားများ
မည်သည့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးအကြံပြုခြင်းမျိုးတွင်မဆို အရေးအကြီးဆုံးသည် နားထောင်ခြင်း ဖြစ်
သည်။ နားထောင်ခြင်း ဟုဆိုရာတွင် ငြိမ်နေခြင်းမဟုတ်ဘဲ၊ စိတ်ဝင်တစား ဂရုစိုက်နားထောင်
ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် တိုင်ပင်သူ၏စကားကို ဟန်ဆောင်မှုလုံးဝမပါဘဲ၊ စိတ်ပါဝင်စားစွာ ဂရုတစိုက်နားထောင်ပေးရမည်။ ကောင်းဆဲလိန်းအခန်းတွင် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် စကားပြောသောသူမဖြစ်ဘဲ နားထောင်သောသူဖြစ်ရမည်။ (ယာကုပ်၁း၁၉-၂၀)။
အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် တိုင်ပင်သူကိုလေး စားမှုပြုရမည်။ လူသည် ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်းသော သူဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင်ချစ်တော်မူကြောင်း၊ တန်ဖိုးရှိသောသူဖြစ်ကြောင်း၊ အကူအညီပေးခြင်းဖြင့် လူသည် ပြောင်းလဲပြီး ကြီးထွားရင့်ကျက်နိုင်သော စွမ်းရည်ရှိကြောင်းသိရမည်။
အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် တိုင်ပင်သူကို အထင်သေးခြင်း၊ အပြစ်တင်ခြင်းမပြုသင့်ပါ။ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်သည် တိုင်ပင်သူ၏ အားနည်းချက်များကို ရိုးသားစွာ နားလည်ပေးနိုင်ရန် ကြိုးစားပြီး၊ အခြေအနေတိုင်းကို အပြုသဘောဆောင်သောခွန်အားဖြင့် မြင်တတ်ရမည်။ ရိုးသားဖြောင့်မတ်သော ကောင်းဆဲလိန်းတွင် တရားစီရင်ခြင်းထက် နားလည်ပေးခြင်းသည် ပို၍ထိရောက်မှုရှိသည်။တိုင်ပင်သူကို မတရားသဖြင့် အပြစ်တင်ခြင်းကိုရှောင်ရမည်။
တိုင်ပင်ဆွေးနွေးအကြံပြုခြင်းတွင် မျှော်လင့်ခြင်းဆိုသည်မှာ တိုင်ပင်သူကို ဘုရားသခင်ပေးသောခွန်အားနှင့် တန်ဖိုးရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်အနေဖြင့် မြင်ခြင်းနှင့် သူ၏ ကြီးထွားရင့်ကျက်ခြင်းအတွက် အပြုသဘောဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ မှန်ကန်သော မျှော်လင့်ခြင်းနှင့် တိုင်ပင်သူကို အားပေးခြင်းဖြစ်သည်။ (လုကာ ၁၉း၁-၁၀။ ယောဟန် ၈း၁-၁၁)
ထပ်တူထပ်မျှ မျှဝေခံစားခြင်းဆိုသည်မှာ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က တိုင်ပင်သူ၏ အတွင်းခံစားချက်များဖြစ်သည့်နာကျင်မှု၊ ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှု၊ အထီးကျန်မှုများကို မျှဝေခံစားပေးခြင်း၊ စာနာထောက်ထာခြင်းဖြစ်သည်။ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် တိုင်ပင်သူ၏ ခံစားသကဲ့သို့ ခံစားနိုင်ရန်ကြိုးစားရမည်။ ဝမ်းမြောက်သောသူနှင့် ဝမ်းမြောက်ခြင်းကို၎င်း၊ ငိုကြွေးသောသူ တို့နှင့်ငိုကြွေးခြင်းကို၎င်း ပြုကြလော့။(ရောမ၁၂း၁၅) သမ္မာကျမ်းစာထဲမှ ဥပမာတစ်ခု ဖော်ပြလိုပါသည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ယောဘဝတ္ထုသည် တိုင်ပင်ဆွေးနွေး အကြံပြုလမ်းညွှန်ခြင်းစာအုပ်ဟု ခေါ်ရလောက်အောင်ပင် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် အပြန်အလှန် စကားပြောခြင်းများ တွေ့ရသည်။ ယောဘသည် စုံလင်ဖြောင့်မတ်သောသူ၊ ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူ၊ မကောင်းသာအကျင့်ကို ရှောင်သောသူဖြစ်ပြီး ကြွယ်ဝချမ်းသာသောသူ ဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ ဘုရားသခင်၏ခွင့်ပြုချက်ကြောင့် စာတန်၏တိုက်ခိုက်ခြင်းကို ခံရသောအခါ သူ၏ပိုင်ဆိုင်မှု အားလုံးပျက်စီးသွားပြီး သားသမီးအားလုံး ဆုံးရှုံးသည်သာမကဘဲ သူ၏ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး အနာစိမ်းပေါက်သဖြင့် မီးဖိုပြာထဲမှာ ထိုင်ရသည်အထိ ဒုက္ခခံစားခဲ့သည်။ ထိုအခါ ယောဘ၏ မိတ်ဆွေများဖြစ်ကြသော ဧလိဖတ်၊ ဗိလ္လတ်နှင့် ဇောဖာတို့သည် သူ့ကိုနှစ်သိမ့်ရန် ရောက်ရှိလာကြသည်။ ယောဘခံစားနေသော ဝေဒနာကို မြင်တွေ့သည့်အခါ အသံလွှင့်၍ ငိုကြွေးခြင်း၊ ဝတ်လုံကိုအုပ်၍ မြေမှုန့်ကိုယူပြီး ခေါင်းပေါ်သို့ပစ်တင်ကြသည်။
ထို့ကြောင့် ယောဘ၏ပြင်းပြစွာခံစားသော ဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာကို မြင်တွေ့သည့်အခါ ခုနှစ်ရက်ပတ်လုံး ယောဘနှင့်အတူထိုင်၍ အဘယ်သူမျှ စကားမပြောမဆိုဘဲနေကြသည်(၂း၁၁-၁၃)။ ထိုနောက် ယောဘ၏ မိတ်ဆွေသုံးယောက်တို့သည် ယောဘခံစားနေရသော ဆင်းရဲဒုက္ခနှင့် ပတ်သက်၍ ယောဘကို အပြစ်တင်ခြင်းများစွာပြောဆိုပြီး၊ ယောဘကလည်း ချေပပြောဆိုခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်သုံးဦးတို့၏ ပြောဆိုချက်များကြောင့် ယောဘသည် မပြောင်းလဲနိုင်ဘဲသူ၌ အပြစ်မရှိကြောင်း ကာကွယ်ပြောဆိုခဲ့သည်။ အချို့သောကောင်းဆဲလိန်းတွင် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် တိုင်ပင်သူကို တရားစီရင်ခြင်း ပြုမိတတ်ကြသည်။ သို့သော် တရားစီရင်ခြင်းသည် တိုင်ပင်သူ ခံစားသောဝေဒနာမှ ကျန်းမာခြင်းမရရှိနိုင်ပါ(အခန်းကြီး ၃း၃၁)။ထိုအခါ ဧလိဟုသည်လာ၍ ယောဘနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း (ကောင်းဆဲလိန်း)ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဧလိဟုသည် ယောဘပြောသော စကားကိုနားထောင်ပေးသည်(၃၃း၁၁-၁၂)။ တိုင်ပင်ဖက်သည် တိုင်ပင်သူပြောသောစကားကို စိတ်ပါဝင်စားစွာ နားထောင်ပေးရမည်။ ဧလိဟုသည် ယောဘကို အကြံပြုလမ်းညွှန်နိုင်ဖို့ရန် သူ၏အခြေအနေကို နားလည်ပေးသည်။ ယောဘ၏ခံစားချက်ကို ထပ်တူထပ်မျှခံစားပေးသည်။ သူ၏ဘဝအခြေနေသည် ယောဘနှင့်တူညီကြောင်း ပြောပြသည်(၃၃း၆)။ယောဘအနေဖြင့်ဘုရားသခင်အပေါ်မှာသံသယမရှိဖို့ သွန်သငပေးသည်
(၃၃း၃၃)။ ယောဘကိုလည်း အမြင်မှန်ရနိုင်ဖို့ရန် အားပေးသည်(၃၄း၃၁မှ၃ရး၂၄ထိ)။ နောက်ဆုံး ယောဘနှင့် တိုင်ပင်ပြောဆိုသောသူသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်(၃၈-၄၁)။ ထိုအခါယောဘသည် အမြင်မှန်ရလာပြီး နောင်တစကားများနှင့် ဝန်ခံပြောဆိုခြင်းများတွေ့ရသည်(၄၂း၁-၆)။သို့ဖြစ်၍ ထာဝရဘုရားသည် ယောဘကိုအနာရောဂါမှ ကျန်းမာခြင်းပေးသည်သာမကယခင်ထက် နှစ်ဆသောဥစ္စာနှင့် သားသမီးများကို ကောင်းကြီးချပေးခဲ့သည်။
သင်းအုပ်ဆိုင်ရာ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးအကြံပြုခြင်း(ကောင်းဆဲလိန်း)သည် သမ္မာကျမ်းစာနှင့် ညီ
ညွတ်သောလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တည်းဟူသော ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်များသည်အသင်းတော်ရှိ အကူအညီလို အပ်သောသူများအပေါ် စေတနာမေတ္တာထားပြီး၊ သူတို့၏ ခန္ဓာ၊ စိတ်၊ ဝိညာဉ်ကျန်းမာခြင်းရရှိရန် ကူညီပံ့ပိုးရမည်။ ထိုသို့ ကူညီရာတွင် ဆုတောင်းခြင်းနှင့် သန့်
ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ လမ်းပြမှုကို ခံယူရမည်။သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုဂရိဘာသာစ
ကားဖြင့် Parakelete ဖြစ်ပြီး၊ ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာဖြစ်ပါသည်။ အဓိပ္ပါယ်မှာ တိုင်ပင်ဘက်၊ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် (Counselor) အကူအညီပေးသောသူ၊ (Helper) နှစ်သိမ့်ပေးသောသူ
သူသည် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အား လိုအပ်သောအရာများကို ဖွင့်ပြပေးမည့်ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်သည်။ ဘု
ရားသခင်မှုတ်သွင်းထားသော သမ္မာကျမ်းစာသည် ကောင်းဆဲလိန်းလုပ်ရာ၌ အသုံးပြုမည့် အ
ကောင်းဆုံးသောလမ်းညွှန်စာအုပ်နှင့် လက်နက်တန်ဆာပလာတစ်ခုဖြစ်သည်။ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်များအားလုံး အသင်းသားများအတွက် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ။ကောင်းဆဲလိန်း ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် သူတပါး၏အသက်တာကို တည်ဆောက်သောသူများ ဖြစ်ကြပါစေ။
Clinebell, Howard. Basic Types of
Resources for the Ministry of Healing and Growth. Complete Revised and Enlarged Edn. Nashville: Abingdon Press, 1984. Hamilton, James D. The Ministry of Pastoral Counseling. Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1972. Hiltner, Seward. Pastoral Counseling: How Every Pastor Can Help People Themselves. Nashville: Abingdon, 1976. Taylor, Harold. Tend My Sheep: Applied Theology 2. London: SPCK, 1993.